XOG: YAA FUDUDEEYEY SAFARADII MUSHARAX KHEYRE DALALKA RUUSHKA IYO QADAR | SMC
Home WARARKA MAANTA XOG: YAA FUDUDEEYEY SAFARADII MUSHARAX KHEYRE DALALKA RUUSHKA IYO QADAR
Ilo xog ogal ah oo katirsan diblomaasiinta safaarada Qadar ayaa noo xaqiijeyey in safaradii musharax Xasan Cali Kheyre uu ku kala bixiyey dalalka Ruushka iyo Qadar ay kadanbeeyeen canaasiir katirsan Hay’ada NISA.
Teliyaha Hogaanka Dbagalka NISA Cabdullahi Daahir Cabdullahi Dheere oo lagu tiriyo shaqsiyaadka MD Farmaajo kudhaarto ayaa lasheegey in uu soo saarey Visa-ha Musharax Kheyre kutagay Ruushka iyo Qadar.
Diblomaasiyiin safaarada soomaaliya ee dalka Daqar oo magacooda qariyey ayaa sheegey in safarada musharax kheyre uu fududeeyey Masuulkaan katirsan Hay’ada NISA isla markaana kaga soo hormarey dalka Qadar.
Teliyaha Hogaanka Dabagalka oo ah shaqsi wajiyo badan ayaa larumeysan yahay in uu isticmaalo kaarar badan si uu usoo saarto hogaamiye isga ka amar qaata walow dowlada mareykanka oo wakiil u yahay ku cadaadineyso in uu dhexdhexaad ka noqodo arimaha doorashada soomaaliya.
Safarka kheyre ayaa lafahamsanyahay in uu wax ka ogyahay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo si wayn uga soo horjeeda in dib loo doorto MD farmaajo.
Next articleDowladda oo Walanweyn ka bilaawday kulamo lagu xalinaayo Colaad Beeleedyada